Deegaanadii shalay ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo Somaliland oo saaka degen – STAR FM SOMALIA
Xaalada deegaanadii ay shalay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa saaka degen inkastoo laga soo sheegayo xiisad colaadeed.
Ciidamada ku dagaalamay deegaanka Tukaraq iyo deegaano ku dhow dhow ayaa la sheegay in ay is horfadhiyaan iyadoo laga cabsi qabo in markale dagaal uu ka dhex qarxo.
Xiisada ka dhalatay weerarkii shalay ay ciidamada Somaliland ku soo qaadeen deegaanka Tukoraq ayaa sababtay in ay baaqato munaasabada sanadguurada 4aad ee doorashada Cabdiweli Maxamed Cali loo doortay Madaxweynaha Puntland.
Baaqashada munaasabadan ayaa lagu sheegay inay salka ku hayso arrimo la xiiira dhinaca amniga. Dagaalka ka dhacay deegaanka Tukoraq ayaa labada maamul ee Somaliland iyo Puntland midba midka kale ku eedeeyay inuu mas’uul ka ahaa.
Hase yeeshee dagaalka ayaa waxaa uu dhacay xilli uu booqasho ku joogo deegaano ka tirsan Puntland Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Qarax Miino Ayaa Saakay Kadhacay Wadada Warshadaha ee Magaalada Muqdisho